ယ့ၫၡုၬဒုၭနဲၪဖျီၪထၪ့အၥၭလၧ အထံၩအဖျဲလဖၪ. | Radio Veritas Asia
တၭအဝ့ၫၥံၪလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဆၧမၩအၥၭလၧဖၧၩ့ၥၭနီၪ, ဒဲအဝ့ၫဒၪဒုၭၥ့ၪယၫအၥၭလၧအဝ့ၫၥံၪ, ဘဲၫၥ့ၪလဲၪဘဲၫ ၥ့ၪလဲၪလၧဆၧကံၪ့ဘျ့ၭကိၪနီၪလီၫ.
အဝ့ၫၥံၪချဲၩ့လိၬအၥၭအဘိၩ့ဘၭတၭ, အနၫ့ဆါဒၪဝ့ၫအီၪဆၧၫ့ထုၪ့လၧအကျၩတၭ, စံၭအဝ့ၫၥံၪ, မွဲဆၧမုၬဆၧလၩအီၪလၧနၥံၪအၥိၭဆံၭ.- အဝ့ၫၥံၪဆီၫ့မီၪ့ဝ့ၫလၧအဒၪၦစၪတၭ, ၥၭမဲၪၥၭဖျဲၩ့ဝ့ၫတၭ, အၥုၪ့အၥၭဝၭထိၬဝ့ၫလီၫ.-
အဝ့ၫဒၪစံၭအဝ့ၫၥံၪ, နၥံၪအၥုၪ့အၥၭဝၭထိၬမွဲဘၪလဲၪ. ဆၧဆီၫ့မီၪ့အီၪထၪ့ လၧနၥံၪအၥၭဖၧၩ့မွဲဘၪလဲၪ.- ယိယစူၪယၫၥၭ ဒဲယခၪ့ယၫၥၭဆံၭ. အဂဲးဘဲၫယီၩ မွဲယနၫ့ဆါဒၪယဝ့ၫလီၫ. ဖီၪ့ယိယၧၩဆံၭ, အဂဲးဘဲၫယီၩ ၦစၪနီၪအီၪလၧအဎွံၪဒဲအယၪ ဘဲၫနၥံၪဒၪဘၪယၧၩယီၩအၥိၭအ့ၬ.- စံၭဆၧဘဲၫနီၪတၭ, ဒုၭနဲၪအစူၪယၫၥၭဒဲအခၪ့ယၫၥၭ လၧအဝ့ၫၥံၪလီၫ.-
အဝ့ၫၥံၪအၥုၪ့ထိၬၥၭထိၬ, ထီၫမံၫထီၫမၪလၧအကၠီၩ့တၭ, ဘိၩ့အလချႃၭနဲၩဒံၭဘၪနီၪ, အဝ့ၫဒၪစံၭ အဝ့ၫၥံၪ, ဆၧအၪ့မွဲအအီၪလမံၩ့မံၩ့ထီးယီၩဆ့ဧၪ. အဝ့ၫၥံၪဖ့ၪလၫ့ယၪကၪလကုၭတၭ, ဒဲန့ၫခိၪထံၪလကုၭတၭ,- အဝ့ၫဒၪမၩန့အၪ့ဝ့ၫ လၧအဝ့ၫၥံၪအမ့ၬယၫလီၫ.- တၭစံၭအဝ့ၫၥံၪ, ဆၧချဲၩလဖၪယီၩ, ယစံၭဝဲၩနၥံၪလၧယအီၪဒံၭ လၧနၥံၪအၥိၭ, လၧကယဲဆၧကွ့ၭ အၥၭလၧစမိစ့ၭ အဆၧၥီၪ့ဆၧၥၫ့အဖၧၩ့, ဒဲလၧမီၪၥံၪအဖၧၩ့, ဒဲလၧအၪ့အူၭဆၧအဖၧၩ့, လၧယဂဲးယကၠီၪ့နီၪ, ဘၪလၧၫ့ထၪ့ဎွ့ၩထၪ့ထီးအလူၬလီၫ.-
ထီးနီၪလဖၧၫ့ ဘဲၫၥိၭအဝ့ၫၥံၪအနါမိဖိး လၧဆၧကွ့ၭအၥၭအဂဲးနီၪ, အဝ့ၫဒၪဒုၭဖၩ့ထၪ့အဝ့ၫၥံၪအၥၭလီၫ.- လီၩဘၪ ဝ့ၫလၧဆၧကွ့ၭအၥၭနီၪတၭ, ဎရံၬမိဘၪထိးဆၧဘဲၫနီၪတၭ, လၧၥၧၫ့နံၩလနံၩအဖၧၩ့နီၪမိဂဲထုၪ့ထဲၩဝ့ၫ, ဒဲၦဘၪလီၩလၩ့လၬလၩ့ ဆၧနီၫ့ယါလၩ့ထဲၩ့အၥၭအဂဲး, ဒဲဆၧကွဲၪဖျါခွံၬဆၧဒဲၩဘၭအဂဲး လၧအမံၩ့အကၠီၩ့လၧယရုစလံၫ့ဖိၪၥံၪ, ထီးအဖိးလၧၦကိၭဆၨၩဒ့ၭလီၫ.- နၥံၪမွဲၦထိးအၥၭလၧဆၧနီၪလဖၪအဂဲးလီၫ.